ANTOKO PLD : Mitsipaka marindrano ny hanovàna ny lalampanorenana
Tsy mitsaha-mitombo ireo antoko politika sy fikambanana hafa maneho hevitra mikasika ny fikasan’ny mpitondra hikitika sy hanova ny lalàmpanorenana. 13 septembre 2017
Anisany mitsipaka marindrano izany ny antoko PLD na Parti Libéral Democrate izay tarihan-dRamatoa Sarah Georget Rabearisoa. Aminy manokana dia misy kajikajy politika tiana ahatongavana ao anatin’izay fikasana hanova ny lalàmpanorenana izay. Ankoatra izay dia tsy miombon-kevitra amin’ny hisian’ny fitsapan-kevi-bahoaka entina hikitihana ny lalàmpanorenana ihany koa ny antoko tarihany.
“Tsy misy antony tokony hikitihana ny lalampanorenena ary tsy misy antony tokony hanemorana ny fifidianana”, hoy ny fanambarana nataony. Raha ny fanehoan-kevitra nentin’ity mpanao politika ity hatrany dia ahiana ho tahotra fa afaka miatrika fifidianana ao anatin’ny mangarahara tanteraka isika amin’izao ka misy ireo mitady hirika ny tsy hahatanteraka izany ka izay no mahatonga azy ireo hanova ny lalampanorenana. Nohamafisiny ihany koa fa tsy azo ekena ny hanemorana ny fifidianana izay ho filoham-pirenena ka hirosoana amin’ny fanaovana fitsapan-kevi-bahoaka hoenti-manova ny lalampanorenana.
Tokony ho tanteraka soa aman-tsara ny fifidianana izay hatao satria raha ny eo anivon’ny vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana dia ampy tsara ny vola hoentina miatrika ny fifidianana ka tsy tokony hisy olana mihitsy ary tsy tokony horebirebena amin’ny zavatra hafa ny saim-bahoaka, hoy hatrany ny fanazavana. Ankoatra ny antoko PLD dia efa nitondra ny heviny ihany koa ny antoko hafa toa ny antoko Maitso sy ny fikambanana CRAM. Raha atao bango tokana dia tsy ny fanovàna ny lalampanorenana no tokony ho laharam-pahamehana amin’izao ary tsy misy antony velively hanovàna ny lalampanorenana fa mety misy ny mahazo tombotsoa manokana ho amin’izany.